Iitafile | December 2021
Ukuhonjiswa kweTafile engama-40 + kunye neziXhobo zeZiko-ezona ziMvo ziBalaseleyo zeTablescape
Nokuba sisidlo sangokuhlwa esiphakathi evekini okanye umthendeleko weholide, kuya kufuneka usete itafile yakho, ke qiniseka ukuba injengechic njengoko kunokuba njalo. Yiba ezethu iindlela zokumisela iitafile kunye nemibono yeetafile zokuzonwabisa okungaqhelekanga kunye nasesikweni.
Iingcamango zeTablescape ze-Bridal Shower - Indlela yokuhlobisa i-Bridal Shower
Jonga ezi zinto zimnandi zetheyibhile yomtshato.
Ungayiseta njani itafile yesidlo sangokuhlwa-Ukuseta iTafile eyiyo eyiyo ngokusesikweni
Isikhokelo senyathelo nenyathelo kwiziseko zokusetha itafile efanelekileyo.
Izitya ezihlaza okwesibhakabhaka kunye ezimhlophe kunye noCwangciso lweeTafile- Iifayile zetafile kunye nokuhombisa kwiBlue & White
Cwangcisa itafile ngokudityaniswa kombala ongakwaziyo ukuya kokungalunganga.
I-25 entle yokuCwangciswa kwetafile yasentwasahlobo-iZiko laseNtwasahlobo eliSitayile-
Ukuba ubungakulungeli ukuphosa itheko lesidlo sangokuhlwa, uya kuthi nje wakubona ezi zinto zintle zentwasahlobo. Ukusuka kwimiboniso yanamhlanje yokuhombisa ukuya kumalungiselelo amahle eentyatyambo, uya kufumana itafile ye-chic ethetha ngesitayile sakho sokubamba apha.
Ezi ziCwecwe zikaHarry Potter ziya kukwenza uzive ngathi ukueHogwarts
Inkcubeko yePop yomrhwebi uToynk uneeseti ezifanelekileyo zokutya zakusihlwa zabathandi bakaHarry Potter. Unokukhetha iseti yokutya ye-Marauder Map, iseti yeNdlu yeHogwarts, iseti yesitya seHogwarts, kunye nokunye.
Uyenza njani iTablescape-Ingcebiso ngeNgcebiso yokonwabisa
Ukuyila umfanekiso-ogqibeleleyo weetafile kulula kunokuba ucinga.
Izicwangciso zeTafile yeBrunch elula-Izicwangciso zeTafile eziMnandi zeBrunch
Iingcamango ezintlanu ezilula zokubeka iitafile kunye neengcebiso ezivela kubayili abahlanu abahlukeneyo, zonke zilungele i-brunch.
Ukucwangciswa kwetafile zangaphandle Iingcamango-Indlela yokuCwangcisa itafile yakho yangaphandle
Ungayiseta njani itafile efanelekileyo yangaphandle yeqela lasehlotyeni.
Ukucwangciswa kwetafile kaRachel Ashwell - Izixhobo zeChabby Chic
Umyili uRachel Ashwell usebenzisa izinto ezindala kunye nezintsha ukwenza iseti yetafile ye-shabby chic.
ubugcisa beKrisimesi obulula babantwana
Izitayile zokuhombisa igumbi
uyile amagumbi okuhlala amancinci